Koh Mak ~ Journey-Assist - Review. Ahoana no hahatongavana any. tora-pasika
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Pattaya » Koh Mak Island
Nosy Koh Mak
Ity nosy ity dia ao amin'ny Golfa any Thailand, 34 km miala ny nosy lehibe kokoa an'i Koh Chang ary 36 km miala ny tanibe Thailand (ny tanànan'i Trat). Izy io koa dia akaikin'ny morontsiraka Kambodza. Ko Mak dia hita ao amin'ny sari-tany eo anelanelan'i Ko Kood sy Ko Chang. Mirefy 16 metatra toradroa ny faritra Koh Mak. km. Ny halavany dia 7,5 km, 27 km ny halavan'ny morontsiraka.
Sarintany antsipirihany momba ny nosy Koh Mak
Sarintanin'ny Nosy Koh Mak
Koh Mak Island ao amin'ny sarintany
Inona no atao amin'ny nosy Koh Mak. Fizahan-tany eco
Raha eo amin'ny lafiny fizahantany, Koh Mak, izay mitovy any akaikin'i Koh Chang (fa na dia izany aza), dia tsara indrindra amin'ny fizahantany ara-tontolo iainana, ary ny fotokevitra fototra amin'izany dia:
lavitra ny fizahan-tany mivezivezy;
fauna sy flora;
faritany tsy manam-paharoa tsy hitan'ny olona.
Koh Mak Island avy any ambony
Amin'ireo hetsika ao amin'ny Koh Mak dia misy ny snorkeling, ny fisakafoanana, ny jono, ny kayak (afaka milomano any amin'ireo nosy akaiky), ny bisikileta.
Misy ny sekoly misitrika ao amin'ny Ko Mak izay manome fitaovana fanofana hofaina sy hanomezana fotoana ireo vao manomboka handray fiofanana manokana miaraka amin'ny taratasy fanamarinana mifanaraka amin'izany. Ary koa, ireo sekoly ireo dia mikarakara ny fisitrihana any amin'ny toerana mahaliana indrindra any akaikin'ny nosy.
Afaka mandeha manarato ianao mandritra ny filentehan'ny masoandro, mandeha an-dranomasina amin'ny sambo. Raha mino ianao ny valala, ny oram-barotra dia ho tena oram-baratra, ary ny haza - mahafinaritra fotsiny.
Ho an'ny olona tia hetsika ara-batana mahery vaika dia mety ny fanjonoana sy bisikileta manodidina ny nosy. Ko Mak no toerana manofa bisikileta sy kayak.
Afaka miakatra ny tendrombohitra Paen Thi koa ianao. Amin'ny salanisa, mitaky 2 ora ary tena tsara amin'ny fahasalamana.
Ny tora-pasika tsara indrindra any amin'ny nosy
Ko Mak dia manavaka ny morontsiraka simba mafy. Ny halavany dia lehibe, ka maro be ny torapasika. Na izany aza, ny ankamaroany dia manary ary tsy misy fotodrafitrasa rehetra. Ny tora-pasika sivily roa ihany no misy: Ao Khao ao amin'ny faritra atsimon'ny Nosy sy i Suan Yai ao amin'ny tapany avaratra. Eo amin'ny faritanin'ny morontsiraka roa dia misy ny trano fandraisam-bahiny sy ny trano fisotroana kafe, ny fanofa-elo ao amin'ny efi-trano sy ny lakilen'ny masoandro, ny ivon-tsakafo, ny toerana fisakafoanana lakana, bisikileta ary bisikileta.
Rehefa mety no fotoana tsara indrindra mankany Koh Mak. vanim-potoana
Ny fialan-tsasatra amin'ny Koh Mak dia azo atao mandritra ny taona. Na izany aza, tsara kokoa ny mandeha an-tsambo eto mandritra ny vanin-taona maina, izay manomboka amin'ny volana Novambra ary mifarana amin'ny Mey. Manomboka amin'ny volana jona ka hatramin'ny oktobra, dia matetika feno rahona sy mafana, na izany aza, misy koa ny mpizahatany maro ao amin'ny nosy mandritra io vanim-potoana io.
Fotodrafitrasa ao amin'ny nosy Koh Mak
Ny mponina maharitra ao amin'ny nosy dia 400-500 izay mipetraka amin'ny tanàna roa - Tukata sy Ban Yai. Mandritra izany fotoana izany, misy baza, klinika iray, kafe Internet 2, departemanta polisy ary fivarotana marobe ao amin'ny Ko Mak.
Ao ihany koa ny sehatra 2 fijerena ireo nosy. Ny iray amin'izy ireo dia antsoina hoe Laem Tukata ary hita ao amin'ny ilany andrefan'ny Koh Mak, ny iray hafa - Laem Kradun, ao atsinanana.
Ahoana ny lalana mankany amin'ny nosy Koh Mak. vidin'ny
Sarintanin'ny Ferisy mankany amin'ny Nosy Koh Mak
Avy any Bangkok ka Koh Mak
Avy any amin'ny seranam-piaramanidina Suvarnabhumi, sidina Bangkok Air iray manidina mankany Trat isan'andro in-2 isan'andro. Ny sidina boribory-fitsangatsanganana dia manodidina ny 5 baht ($ 000). Manomboka any amin'ny seranam-piaramanidina kely ao Trat mankany Laem Ngop pier afaka miditra amin'ny tuk-tuk na taxi ianao. Niala tao amin'ny Laem Ngop Pier mankany Koh Mak. Mandany adiny iray eo ho eo raha oharina, ny vidin'ny fitsangatsanganana an-dàlana ho an'ny lalana dia 160 baht (600 $).
Na ny iray amin'ny biraon'ny fiara fitateram-bahoaka any Bangkok, Ekkamai sy Mochit dia afaka mividy tapakilan'ny fiara fitateram-bahoaka mankany Trat ianao. Avy ao Bangkok mankany Trat ny bus dia hiainga mandritra ny 6 ora. Ireo fiara fitateram-bahoaka toy izany dia miala amin'ny bisy roa amin'ny bus. Ny vidin'ny dia dia 300 baht (10 dolara). Misy fiara-fiara izay manatona mivantana amin'ny pier Laem Ngop. Ny hafa mijanona eo amin'ny gara bus Trat, izay ahafahanao mankany Laem Ngop amin'ny fiaran-dalamby na tuk-tuk, ary avy eo dia sambory ny sambo mandeha sambo mankany Koh Mak.
Mitondrà taxi any amin'ny hotely rehetra any Bangkok mivantana mankany amin'ny sidina Laem Ngop, ary avy eo dia araraoty ilay sambo hafainganam-pandeha toy izany.
Tokony ho tsaroana fa ny sambo hafainganam-pandeha avy any Laem Ngop pier mankany Koh Mak dia mandao indroa isan'andro - amin'ny 12:30 sy 14.
Avy amin'ny nosy Koh Chang ka hatramin'ny Koh Koh Island
Isa-maraina manomboka amin'ny 6:30 ka hatramin'ny 12:30 p.m. manomboka ao Koh Chang ka Koh Mak ny sambo mandeha an-tsambo avy amin'ny piakan'i Bang Bao. Mitentina 600 baht ny dia.
Ny fisintonana ao amin'ny nosy Koh Mak
Tendrombohitra Paen Thi. Sahala amin'ireo nosy maro any Thailand, dia misy tendrombohitra iray any Koh Mak. Any an-tampony dia afaka mankafy ny fomba fijery mahavariana ao amin'ny nosy ianao, ny ranomasina ary na dia ny ampahany amin'ny tanibe Kambodia aza, rakotra tendrombohitra.
Riandrano. Tamin'ny Novambra sy Desambra, ny riandranon'i Koh Mac dia maneho ny hatsarany rehetra. Efa tapitra ny orana amin'izao fotoana izao, ka feno ny renirano ao amin'ny nosy. Ny mpitsidika ny Koh Mak dia mitsidika voalohany ny riandrano lehibe indrindra ao amin'ny nosy - Klong Plu. Eo amin'ny fantsona izay misy azy dia afaka milomano.
Goaara Maracot. Betsaka ny lava-bato goavambe any amin'ireo nosy karst any Thailand. Koh Mack no tsy fantatra. Azonao atao ny miditra ao amin'ny zohy Marakot, izay misy anaty vatolampy, anilan'ny rano izay nanondraka ny grotto ihany.
Ny faritra manodidina akaiky. Akaikin'i Koh Mak dia misy nosy kely vitsivitsy - Rayang Nok, Kradad ary Kham. Na dia eo aza ny habe keliny, samy manana ny toerana fizahan-tany ny mpizahatany. Ireo trano fandraisam-bahiny tena tsotsotra indrindra, izay, na izany aza, dia manana ny zavatra rehetra ilainao. Ireo nosy ireo dia tsy feno tahaka an'i Koh Mak, ary manome fahafahana hisitrana, fisitrandrahana ary fialan-tsasatra mahazatra amin'ny tora-pasika.
Ny tempoly akaikin'ny pier Ao Nid. Tempolin'ny Buddhista miasa izy io, nefa tena maotina tokoa ary tsy hita maso ny soatoavina sy ny kolontsaina azo tsapain-tanana.
Museum of life of Thai, izay mampiseho, ohatra, ny ao anaty trano mahazatra Thai miaraka amin'ny fanaka sy kojakojan-tokantrano.
Torapasikin'ny nosy Koh Mak
Bark of Tukat.
Trano fonenana ao amin'ny nosy Koh Mak
Hotely ao amin'ny nosy Koh Mak. sarintany
Ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny Koh Mak dia eo akaikin'ny pier, izay sambo mandeha haingana miaraka amin'i Lai Ngopa sy Koh Chang. Noho izany, ireo trano fandraisam-bahiny ireo dia azo averina mandeha an-tongotra. Misy mitondra fiara. Tsy misy olana amin'ny fitaterana eto - ny mpizahatany mandeha any amin'ny seranana dia arahabaina ny songteo mamonjy hotely. Mazava ho azy fa tsara kokoa ny hamaky mialoha ireo hotely raha toa ianao ka mandefa fifindrana.
Ny vidin'ny trano ao Koh Mak dia amin'ny 10 ka hatramin'ny 50 dolara isan'andro. Akaikin'ny Suan Yai Beach, ny vidiny dia avo noho ny any amin'ny faritra hafa amin'ny nosy.
Weather in Koh Mak Island ankehitriny + vinavina